Otu esi ezere mgbanwe ihu igwe: ndụmọdụ kacha mma | Green Renewables
Mgbanwe ihu igwe bụ nsogbu kasịnụ na-eche ụmụ mmadụ ihu na narị afọ a. Ihu igwe anyị na-agbanwe na ya niile meteorological mgbanwe na ụkpụrụ nke ikuku. Ihe kacha akpata mgbanwe ihu igwe a bụ n'ihi mmadụ. Ọrụ akụ na ụba mmadụ na-abawanye na-emebi emebi ma na-ebibi ihe ndị e kere eke. Onye ọ bụla dị ka mmadụ nwere ike ime ihe dị iche iche iji gbochie nke a ịba ụba. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche ka esi zere mgbanwe ihu igwe.
Ya mere, anyị na-atụle ntụziaka kachasị mma iji mụta ka esi zere mgbanwe ihu igwe.
1 Omume iji mụta ka esi zere mgbanwe ihu igwe
1.1 Na-ebelata ihe ọkụkụ
1.2 Chekwaa ume
1.3 Ngwa njikwa
1.4 Gbanwee maka bọlbụ LED
1.5 Otu esi ezere mgbanwe ihu igwe site na imegharị ihe
1.6 Nkwakọ ngwaahịa pere mpe
1.7 Melite nri
1.8 Ọrụ afọ ofufo
1.9 Jiri obere mmiri ọkụ na-akwado mmeghari ohuru
Omume iji mụta ka esi zere mgbanwe ihu igwe
Na-ebelata ihe ọkụkụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ itinye aka na ọgụ megide mgbanwe ihu igwe, jiri ụgbọ ala gị mee ihe n'ókè. Jiri ụgbọ njem na-adigide dịka o kwere mee, dị ka igwe igwe ma ọ bụ jiri ụgbọ njem ọha karịa. N'ihe gbasara ebe dị anya, ihe kacha adịgide adịgide bụ ụgbọ oloko, na n'elu ụgbọ elu, ọ bụ ya na-ahụ maka akụkụ buru ibu nke ikuku carbon dioxide n'ime ikuku. Ọ bụrụ na ị ga-eji ụgbọ ala, Buru n'uche na kilomita ọ bụla ị na-agba ọsọ na-abawanye CO2 ma na-efu nke ukwuu. Lita mmanụ ụgbọala ọ bụla na-eri na-anọchi anya ihe dị ka kilogram 2,5 nke carbon dioxide na-esi n'ikuku pụta.
Site na ụfọdụ obere ntuziaka n'ụlọ anyị nwere ike ịmụta ka esi zere mgbanwe ihu igwe site na ịchekwa ike. Ka anyị hụ ihe ntuziaka ndị a bụ:
Ahapụla TV na kọmputa gị na ọnọdụ njikere. Igwe onyonyo na-agbanye awa atọ n'ụbọchị (na nkezi, ndị Europe na-ekiri telivishọn) ma nọrọ na njikere maka awa 21 fọdụrụnụ, na-eri 40% nke mkpokọta ike na ọnọdụ njikere.
Ahapụla chaja mkpanaka gị na-agbanye na ọkụ ọkụ mgbe niile, ọ bụrụgodị na ejikọtaghị ya na ekwentị, n'ihi na ọ ga-anọgide na-eri ike.
Gbanwee thermostat mgbe niile, ma kpo oku ma ọ bụ ntụ oyi.
Ị maara na site n'iji ngwa eletrik dị n'ụlọ gị nke ọma na nke ọma, ị nwere ike itinye aka na ọgụ megide mgbanwe ihu igwe? Anyị na-enye gị ndụmọdụ ụfọdụ:
Kpuchie ihe oriri mgbe isi nri bụ ụzọ dị mma isi chekwaa ike. Ọbụna nke ka mma bụ ndị na-esi nri nrụgide na steamer, nke nwere ike ịchekwa ike 70%.
Jiri igwe nhicha na igwe asa ihe naanị mgbe afọ juru ha. Ọ bụrụ na ọ bụghị, jiri obere mmemme. Ọ dịghị mkpa ịtọ okpomọkụ dị elu, n'ihi na ihe nchacha dị ugbu a dị irè ọbụna na obere okpomọkụ.
Recuerda que friji na friza ga-erikwu ume ma ọ bụrụ na ha nọ nso ọkụ ma ọ bụ ji esi mmiri ọkụ. Ọ bụrụ na ha emewo agadi, na-agbaze ha kwa oge. Nke ọhụrụ nwere okirikiri defrost akpaka nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Etinyela nri ọkụ ma ọ bụ ọkụ na refrjiraeto: ị ga-echekwa ike ma ọ bụrụ na i buru ụzọ hapụ ya ka ọ dị jụụ.
Gbanwee maka bọlbụ LED
Dochie bọlbụ ọkụ ọdịnala na bọlbụ ọkụ na-azọpụta ike na-echekwa ihe karịrị kilogram 45 nke carbon dioxide kwa afọ. N'ezie, nke abụọ dị oke ọnụ, mana dị ọnụ ala na ndụ gị. Dị ka European Commission si kwuo, otu n'ime ha nwere ike ibelata ụgwọ ọkụ eletrik ruo euro 60.
Otu esi ezere mgbanwe ihu igwe site na imegharị ihe
Ebumnuche nke 3R iji mee ka ọgụ megide mgbanwe ihu igwe dị mfe site na omume atọ:
Ọ na-eri obere ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Jiri ahịa nke abụọ nye ohere ọzọ maka ihe ndị ị na-anaghị ejizi ma ọ bụ nweta ihe ndị ọzọ na-adịghị mkpa. Ị ga-echekwa ego ma ị ga-enwe ike ibelata oriri. Na-emekwa omume nzikọrịta ozi.
Nkwakọ ngwaahịa megharịa, ihe mkpofu eletrọnịkị, wdg. Ị maara na ị nwere ike ịchekwa ihe karịrị kilogram 730 nke carbon dioxide kwa afọ site na iji naanị ọkara nke ihe mkpofu a na-emepụta n'ụlọ gị?
Nkwakọ ngwaahịa pere mpe
Họrọ ngwaahịa nwere obere nkwakọ ngwaahịa: karama 1,5 lita na-emepụta ihe mkpofu na-erughị karama 3 lita.
Mgbe ị na-aga ịzụ ahịa, jiri akpa ndị a na-emegharịgharị.
Zere iji nhicha mmiri na oke akwụkwọ. Ọ bụrụ na i belata ihe mkpofu site na 10%, ị nwere ike zere mpụta nke 1.100 kg nke carbon dioxide.
Nri nwere obere carb pụtara iri ihe nke ọma na ịlụso mgbanwe ihu igwe ọgụ.
Belata oriri anụ - Anụ anụ bụ otu n'ime nnukwu mmetọ ikuku - na-abawanye oriri nke mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na akwụkwọ nri.
Zụrụ ngwaahịa mpaghara na nke oge: Gụọ akara ndị ahụ ma rie ngwaahịa ndị dị nso ka ịzenarị mbubata na-eche na ikuku ebubata agbakwunyere.
Na-erikwa ngwaahịa nke oge a ka ịzenarị ụzọ mmepụta ndị ọzọ na-esighi ike.
Gbalịa rie ọtụtụ ngwaahịa organic n'ihi na a na-eji obere pesticides na kemịkalụ ndị ọzọ eme ihe n'usoro mmepụta.
N'ọgụ megide mgbanwe ihu igwe, a ga-achọrịrị nchekwa nke otu ọhịa:
Zere omume ndị nwere ike ibute ọkụ, dị ka grilling na eke oghere.
Ọ bụrụ na ị ga-azụrịrị osisi, nzọ na asambodo ma ọ bụ akara nke na-adigide mmalite.
Kụrụ osisi. Osisi ọ bụla nwere ike ịmịkọrọ ihe ruru ton nke carbon dioxide, yabụ ị ga-enyere aka ịlụso mgbanwe ihu igwe ọgụ.
Jiri obere mmiri ọkụ na-akwado mmeghari ohuru
A chọrọ nnukwu ume iji kpoo mmiri ọkụ. Ndị a bụ ụfọdụ omume megide mgbanwe ihu igwe ga-echekwakwa gị ego:
Wụnye onye na-ahụ maka ịgbasa mmiri na ịsa ahụ na ị ga-ezere mpụta nke ihe karịrị 100 kilos nke carbon dioxide kwa afọ.
Na-asa ahụ na mmiri oyi ma ọ bụ ọkụ na ị ga-echekwa 150 kilos nke CO2.
Ị na-echekwa mmiri ọkụ na-eji ike ugboro anọ ma ọ bụrụ na ị na-asa ahụ kama ịsa ahụ.
Gbanyụọ mgbata mgbe ị na-asa ezé gị.
Jide n'aka na mgbata gị anaghị agbapụta. Otu ntapu nwere ike tufuo mmiri zuru oke iji jupụta ebe ịsa ahụ n'ime otu ọnwa.
N'ikpeazụ, ọzọ n'ime omume ịlụ ọgụ megide mgbanwe ihu igwe nke ị nwere ike ime bụ ịhọrọ ike ndụ ndụ ma kwalite ọgbọ nke ume ọhụrụ dị ka anyanwụ, ifufe, hydraulic, wdg.
Enwere m olileanya na site na ndụmọdụ ndị a ị nwere ike ịmụtakwu banyere otu esi ezere mgbanwe ihu igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Otu esi ezere mgbanwe ihu igwe